Kedu ihe bụ ihe ndị kacha ewu ewu na India? | Njem zuru oke
Ezie na ọ bụ eziokwu na n'elu 5 nke ihe kpatara ọnwụ na India Ha bụ ọrịa akwara, afọ ọsịsa, ọrịa iku ume, nkụchi obi na influenza, ọ bụghị naanị ha. Ọmụmaatụ anyị nwekwara ike banyere oyi baa ma ọ bụ oyi baa, ọrịa nke akụkụ okuku ume nke mejupụtara mbufụt nke oghere alveolar nke ngụgụ. Ha nwere ike ibute site na microorganisms dị iche iche, dịka nje na nje.
La ụkwara nta a makwaara dị ka TB bụ nje na-efe efe na-efe efe nke na-emetụtakarị ngụgụ, na-ebutekwa ya site n'ikuku.
Ihe ọzọ na-akpatakarị ọnwụ na India bụ ọkpụrụkpụ ịmụ nwa. Nwa n’ebughị oke n’ahụ nwere ike igosi na o pere mpe, na a mụrụ ya n’oge (akaghi aka), ma ọ bụ ha abụọ. Babiesmụaka amụrụ obere ọmụmụ nwere ike ịnwe nnukwu nsogbu ahụike n’oge ọnwa mbụ nke ndụ ha na ọghọm nke nkwarụ na-adịte aka. Obere ọmụmụ nwa na-ezo aka n’ebe ụmụ ọhụrụ nọ bụ́ ndị na-erughị kilogram 5.5 mgbe a mụrụ ha.
Anyị kwesịkwara ikwu banyere igbu onwe ya, ihe mmadụ ji akpachara anya akpata ọnwụ. Ọrịa ọgụgụ isi, ọkachasị ịda mba na ị alcoholụbiga mmanya oke, ị abuseụ ọgwụ ike, ime ihe ike, n'etiti ndị ọzọ, bụ isi ihe kpatara igbu onwe onye.
na ọrịa imeju o Ọrịa imeju bụ nsogbu na - eme ka imeju rụọ ọrụ nke ọma. Fọdụ n’ime ha bụkarịa ịrịa ọria na ịba ọcha n’anya.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu banyere ihe mberede okporo ụzọ, ihe mberede ụgbọala nke na-ebute ihe mberede na-akpata ọnwụ ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala, ndị njem ma ọ bụ ndị na-agafe agafe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Kedu ihe bụ ihe ndị kacha ewu ewu na India?
Kedu ebe kachasị mma maka kitesurfing na Australia?